सुत्केरीको हवाई उद्धार ढिला- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सुत्केरीको हवाई उद्धार ढिला
पुस ७, २०७६ विद्या राई
काठमाडौँ — डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–१ हुरीकोटकी २७ वर्षीया जमानदेवी रोकायालाई कात्तिक अन्तिम साता सुत्केरी बेथाले च्याप्यो । परिवारले उनलाई भोलिपल्ट बिहान ८ बजे जगदुल्लाकै काइगाउँको बर्थिङ सेन्टर लगे ।
त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्रै लैजान आग्रह गरे । बिहान ९ बजे नै परिवारले निःशुल्क हवाई उद्धारका लागि डोल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गरे । तर सेनाको हेलिकप्टर दिउँसो २ बजे मात्रै आइपुग्यो । सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताल पुर्‍याएर शल्यक्रिया गर्दागर्दै उनको मृत्यु भयो ।
‘परिवारले चाँडै जानकारी दिएको भए वा सुर्खेतमै हेलिकप्टर भइदिएको भए बचाउन सकिन्थ्यो,’ डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले भन्छन्, ‘सुर्खेतको हेलिकप्टर बिग्रिएको रहेछ, काठमाडौंबाट ल्याउँदा ढिला भयो ।’
बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाकी ३५ वर्षीया पुल्ती रावलले मंसिर दोस्रो साता घरमै छोरो जन्माइन्, तर साल अड्कियो । पछि अत्यधिक रक्तस्राव भएर बेहोस भइन् । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई लगेर साल निकालियो । एक्कासि रक्तस्राव सुरु भएपछि स्वास्थ्यकर्मीले निःशुल्क हवाई उद्धारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गर्दागर्दै रावलको मृत्यु भयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्ने गरिएको छ । तर हवाई उद्धार ढिला भएर ज्यान गुमाएका रोकाया र रावलजस्ता सुत्केरी थुप्रै छन् । जिल्ला अस्पताल बाजुराका प्रमुख डा. रूपचन्द्र विश्वकर्माका अनुसार उक्त जिल्लामा मात्र भदौयता चार सुत्केरीले ज्यान गुमाए । ताप्लेजुङमा घरमै सुत्केरी गराउँदा धेरै रक्तस्राव भएर पछिल्लो तीन वर्षमा १६ सुत्केरीले ज्यान गुमाए ।
साउन ०७५ देखि गत भदौसम्ममा आठ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हवाई उद्धारका लागि संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला, डोटी, जाजरकोटलगायत ३० जिल्ला र सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा र बागलुङका आंशिक क्षेत्र (२० स्थानीय तह) लाई समेटिएको छ । ‘सुत्केरीहरूको मृत्युको संख्या हेर्दा मन्त्रालयको अभियान अपर्याप्त छ कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन् । उद्धार कार्यक्रम केही सांसदको पहुँचका भरमा कर्णाली प्रदेश केन्द्रित भयो भन्ने गुनासा पनि आएको उनले बताइन् । ‘सुत्केरी उद्धार पहुँचका आधारमा नभएर आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सुत्केरी र उनको परिवारले पनि गर्भवती भएदेखि नै भविष्यमा पर्ने जोखिमबारे सजग रहनुपर्छ ।’
मन्त्रालयकी महिला सशक्तीकरण महाशाखा प्रमुख अञ्जु ढुंगाना पनि सम्बद्ध परिवारले तयारी र उद्धारबारे जानकार हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामीले सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्ममा सूचना पुर्‍याएका छौं । हेलिकप्टर भन्नेबित्तिकै पुगिहाल्दैन । उद्धार गर्नुपर्ने भए चाँडो जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सरकारले हवाई सेवा उद्धार कार्यविधि ०७५ असोज २९ मा पारित गरेको हो । ०७५ पुसदेखि गत असोजसम्म ५१ जनाको उद्धार भएकामा २० जना कर्णाली प्रदेशका छन् । गत वर्ष हवाई उद्धारका लागि ५ करोड छुट्याइएकोमा ५० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भयो ।
चालु वर्षका लागि पनि त्यति नै बजेट छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि गत वर्ष हवाई उद्धार सुरु गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि उच्च मातृ मृत्युदर हुने मुलुकमा पर्छ । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २ सय ३९ छ । प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०९:१३
कता जाँदै छ हास्यव्यंग्य ?
काठमाडौँ — आदिकवि भानुभक्त आचार्यले कविताबाटै हास्यव्यंग्य पस्केका थिए । त्यसपछि नेपाली हास्यव्यंग्य परम्परालाई निबन्ध विधामार्फत भैरव अर्याल, केशवराज पिँडालीजस्ता अग्रज स्रष्टाले स्थापित गरिदिए ।
साहित्य लेखनबाट अघि बढेको यो परम्परा अहिले गाईजात्रा प्रहसन, टेलिफिल्म हुँदै फिल्ममा समेत प्रवेश भइसकेको छ । यस्तोमा नेपाली हास्यव्यंग्यको स्थिति के छ ? हास्य र व्यंग्यको मर्मलाई नयाँ पुस्ताले कसरी ग्रहण गरिरहेको छ ? शनिबार राजधानीमा स्रष्टा र कलाकारहरूले बहस गरे ।
जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित ‘नेपाली हास्यव्यंग्य परम्परा’ शीर्षकको बहसमा हास्य कलाकार बसुन्धरा भुसाल, कवि तथा सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण गाम्नागे र कवि एवं समालोचक नरनाथ लुइँटेलले हास्यव्यंग्य साहित्य र कलाको क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो प्रवृत्ति चिरफार गरे । उनीहरूका अनुसार विसं २०४६ को परिवर्तनभन्दा अघि मुलुकको परिस्थिति भिन्न थियो । हास्यव्यंग्य लेखन र प्रस्तुतिहरू त्यतिबेला पनि हुन्थे, पछि झन् मौलाउँदै गयो । यसपछि निबन्ध विधामा मात्र केन्द्रित हास्यव्यंग्य प्रहसन र कविता हुँदै हास्य टेलिफिल्मतिर पनि पस्यो ।
‘सुरुमा हास्यव्यंग्यलाई निबन्धको पर्यायवाचीका रूपमा लिइन्थ्यो,’ लुइँटेलले भने, ‘अहिले यो लेखनभन्दा बढी प्रस्तुतितिर चल्तीमा आएको छ ।’ पछिल्लो समय लेखनमार्फत खगेन्द्र संग्रौला, विमल निभाजस्ता स्रष्टाले र अभिनयमार्फत मह जोडी (मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य), मनोज गजुरेल, सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) जस्ता व्यक्तिहरूले हास्यव्यंग्य परम्परालाई अघि बढाउन योगदान पुर्‍याए पनि अर्यालभन्दा माथि उठ्न भने कोही पनि नसकेको लुइँटेलले दाबी गरे ।
‘तीन दशकदेखि भैरव अर्यालको ठाउँ रिक्त नै छ,’ उनले भने, ‘गुणात्मक लेखन नभएरै त्यसो भएको हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार हास्य र व्यंग्य फरक–फरक हुन् । यसलाई विधाभन्दा पनि शैलीका रूपमा लिनुपर्ने उनको ठहर छ । कवि गाम्नागेले पनि सही थपे । ‘हास्य मनोरञ्जन दिने र अरूलाई हँसाउने खालको हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्यंग्यमा चोटिलो प्रहार हुन्छ, जसबाट कसैको मनमा चोट पनि लाग्न सक्छ ।’
हास्य र व्यंग्यलाई एउटै पाटोमा राखे पनि आफैंमा नितान्त भिन्न रहेको मत दिइन् अभिनेत्री भुसालले पनि । झन्डै ६ दशकको कला यात्रा गरिसकेकी उनले हास्य–व्यंग्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकृति देखा परेको औंल्याइन् । ‘ए रातै’ जस्ता शब्द उच्चारणबाट हास्य विधामा चिनिएका भुसालसँग ‘परालको आगो’ जस्ता पुरानो फिल्मको अनुभव पनि छ । पहिलेका फिल्महरूमा हास्य–व्यंग्य अहिलेको जस्तो भद्दा नरहेको उनको ठम्याइ छ । ‘हामीले अरूलाई हँसाए पनि हाम्रो भाषा सौम्य, सभ्य र शिष्ट हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो बोली र लगाउने कपडामा कुनै उट्पट्याङपन थिएनन् ।’ उनका अनुसार अहिले जसरी भए पनि दर्शकलाई हँसाउनतिर मात्र कलाकारहरू केन्द्रित देखिन्छन् । नाक मुख बंग्याएर, अनुहार बिगारेर, कमजोरलाई हेपेर, भद्दा कपडाहरू लगाएर यस्तैयस्तै । ‘अहिलेका हास्य कलाकारहरू दर्शकलाई जसरी पनि हँसाउन खोज्ने जोकरजस्ता भएका छन् । तर, हामी कलाकार जोकर हुनुहुँदैन । र, होइनौं पनि,’ उनले भनिन् । आफ्नो मर्यादा र अनुशासनमा रहन उनले नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूलाई सुझाइन् पनि ।
हास्यव्यंग्य भन्नेबित्तिकै अहिले नेता, कार्यकता वा कुनै क्षेत्रमा भइरहेको विसंगति, विकृतिविरुद्धको प्रहार र छेडखानी भन्ने आम मानिसको सोचाइमा आइसकेको छ । अझ नेतालाई त गाईजात्राजस्ता प्रहसनमा नामै तोकेर, उसको हुबहु आकृति नै उतारेर उसकै अगाडि व्यंग्य गर्ने प्रचलन बढेको छ । यस्तो प्रचलनले प्रवृत्ति चित्रण र व्यंग्यभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित प्रहारको बढोत्तरी गरिरहेको छ । हरेक वर्ष हास्यव्यंग्य देउसीभैलो गर्दै आएको संस्था सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष गाम्नागे यसलाई केही विकृत भएर अघि बढिरहेको स्विकारे । ‘मुलुकको वास्तविक अवस्थालाई हास्यरस मिसाएर प्रहार गर्दा व्यक्तिगत नै बढी पर्न जाने रहेछ,’ उनले भने । लुइँटेलले भने हास्यव्यंग्यमा व्यक्तिभन्दा प्रवृत्तिलाई बढी जोड दिनुपर्ने बताए । अहिलेको नयाँ कलाकारहरूमा हास्य र व्यंग्यसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानको अभाव रहेको पनि लुइँटेलको मत छ । सैद्धान्तिक पक्षलाई बुझेर मात्र यस क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उनले सुझाए ।
हास्यव्यंग्यलाई शालीन रूपमा दिगो बनाएर अगाडि बढाउने हो भने लेखन, अभिनयजस्ता पक्षहरूमा सेन्सरको व्यवस्था हुनुपर्ने तीनै जना स्रष्टाको विचार थियो । दर्शकलाई जबरजस्ती हँसाएर मनोरञ्जन दिनेभन्दा पनि समसामयिक विषयलाई सान्दिर्भिक बनाएर समाजले पचाउने खालको विषयवस्तु बनाउनुपर्ने उनीहरूको मत थियो । शिलापत्र डटकमले ‘स्रष्टासँग शिलापत्र’ को छैटौं शृंखलाका लागि हास्यव्यंग्य विषय रोजेको हो । शिलापत्रले मासिक रूपमा प्रत्येक महिनाको पहिलो शनिबार साहित्यिक बहस गर्दै आएको कार्यक्रम संयोजक घनेन्द्र ओझाले बताए ।
प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०९:०६